SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo kasoo laabtay booqashadii Suudaan – Warfaafiye:
SAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo kasoo laabtay booqashadii Suudaan
Ali Mohyadin Oct 7, 2017 0
Madaxweyne Farmaajo ayaa galinkii hore waxa uu booqday xarunta Jaamacadda Caalamiga ee Africa oo ay dhigtaan ardayda Soomaaliyeed ee ugu badan ardayda wax ka barata Jaamacadaha ku yalla dalka dibaddiisa. Guddoomiyaha Jamacadda Caalamiga ah ee Africa Dr.Kaamil Cubayd, barayaasha Jaamacadda, ardayda iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa halkaas ku soo dhaweeyey Madaxweynaha.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan gaar ah la qaatay maamulka Jaamacadda ayaa uga mahad celiyey Jaamacadda Caalamiga ah ee Africa, Maamul iyo Macaluimiinba , dadaalka ay ku bixiyeen ardayda Soomaaliyeed. “Taariikh lama illaawaan ah ayaad ku leedihiin sooyaalka waxbarashada Soomaaliya, waxa aad na garab istaagteen xilli aysan ka jirin dalkayaga nidaam waxbarasho iyo hannaan dowladeed, waxaan rajaynaynaa in aad sii laba laabtaan dadaalkaas” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale Salaaddii Jimcaha kula tukuday Masjidka Jaamacadda boqolaal ka mid ah ardayda wax ka barata dalkaas. Dowladaha Soomaaliya iyo Sudan ayaa intii ay booqashada ku joogeen magaalada Khartoum wafdiga uu horkacayay Madaxweyne Farmaajo waxa ay kala saxiixdeen heshiis iskaashi oo dhinacyo badan ka kooban.